‘म्याडम, तपाईँको महिनावारी किन हुँदैन ?’ — Motivate News
पुस २७, अछाम – “महिनावारी रोक्न मैले पिल्स खाने गरेकी छु, त्यसैले महिनावारी हुँदैन”, बारलाको जनप्रिय प्राथमिक विद्यालयकी महिला शिक्षक राजकलाकुमारी बटालाले यसैगरी झुटो नबोल्ने हो भने विद्यालयभित्र प्रवेश गर्नै पाउनुहुन्न।
विद्यालय व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा अभिभावकले बेलाबखत ‘म्याडम, तपाईँको महिनावारी कहिले हुन्छ? तपाईँको महिनावारी किन हुँदैन?’ लगायतका अनावश्यक प्रश्न ठड्याइरहन्छन्। आफू छ दिनसम्म कक्षा कोठामा प्रवेश नगर्ने हो भने विद्यार्थीको पठनपाठन बिग्रन्छ भन्ने थाहा पाएर झुटो बोल्ने गरेको उनले बताइन्। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
महिनावारी भएको छैटौँ दिनमा चोखिने र भान्सा तथा मन्दिरमा प्रवेशका लागि नौ दिन नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने चलन कायम छ। बैठकमा उपस्थित महिला शिक्षकले महिनावारी भएको नवौं दिनमा घाम अस्ताउने बखत स्नान गरेपछिमात्र महिलाले पूर्णरूपमा शुद्धि प्राप्त गर्ने मान्यता रहेको बताए। “वयस्कले सहलान् तर स्कुले छात्राले यस्तो जाडोमा साँझ ४ बजेपछि चिसै पानीले स्नान गरेर चोखिनुपर्दाको पीडा कस्तो होला, सोच्नुस् त!” मङ्गला नेपाल राष्ट्रिय मावि ओलीगाउँका मावि शिक्षक धनकला ठकुल्लाले भनिन्।
पूर्वसांसद शेरबहादुर कुँवरले छाउपडी प्रथा मान्ने आमा र सासूलाई महिला शिक्षकले ‘बड्डी ! तिम्रा दिन खाए’ भनी जवाफ दिनुपर्ने बताए।